धुम्रपान गर्नुहुन्छ ? – JGGC
-डा. मिनल्मा पाण्डे, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल
‘स्वास्थ्यका लागि धुम्रपान हानिकारक छ’ भन्ने नारा सबैले सुनेका छन् । तर, धुम्रमानको बेफाइदातर्फ शिक्षित मानिसको पनि ध्यान जान सकेको छैन । मानिसले जतिसुकै सन्तुलित भोजन र शारीरिक व्यायाम गरे पनि यदि उसले धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छ भने कहिल्यै स्वस्थ रहन सक्दैन ।
चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन, टारजस्ता स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक रसायन हुन्छन् । निकोटिनले १० सेकेन्डमा मस्तिष्कमा असर गर्न सुरु गर्छ । निकोटिन मुटुका लागि पनि धेरै नै हानिकारक हुन्छ ।
धुम्रपानले क्यान्सर हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ, तर यसले क्यान्सरभन्दा बढी मुटु रोग निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ । निकोटिनको कारणले कोलेस्टेरोल बढ्न थाल्छ, जसले गर्दा रगतमा अक्सिजनको कमि हुन गई हृदयघात हुने सम्भावना बढेर जान्छ । मुुट रोगको प्रमुख कारण नै धुम्रपान हो ।
धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नसर्ने रोगको पनि कारण मानिन्छ । अर्को कुरा, धुम्रपानले सेवन गर्नेलाई मात्र नभई वरिपरि बस्नेलाई पनि झन् असर गर्छ । यसलाई ‘सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ’ भनिन्छ । सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङका कारण विश्वभर बर्सेनी ६० लाखभन्दा बढी मानिसको अल्पायुमा मृत्यु हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ । चुरोटको धुँवालाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी रसायन क्यान्सर र मुटुरोगको कारकतत्व मानिन्छन् । संगठनका अनुसार नेपालमा ५१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गरेको छ । जसमा मुटु एवं रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट २५, क्यान्सरबाट ११, श्वासप्रस्वाससम्बन्धी रोगबाट ५, मधुमेहबाट २ र अन्य नसर्ने रोगबाट ८ प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ । एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा बर्सेनी ५१ लाख मानिसको मृत्यु चुरोट सेवनका कारणले मात्रै हुन्छ ।
मानिसको शरीरमा रातो रक्तनली र निलो रक्तनलीबाट रक्त सञ्चार हुन्छ । निलो नली हामीले देख्न सक्छौं तर रातो नली देखिँदैन । धुम्रपानका कारण निकोटिनले रातो रक्तनलीहरू कडा हुन थाल्छ । जसले कोलेस्टेरोल बढ्न जान्छ । यसले शरीरमा फ्याट पनि बढ्दै जान्छ । मुटु रोगको पाँचवटा जोखिम तत्वमध्ये चुरोट र सुर्ती प्रमुख एक हो ।
चुरोट सेवन नगर्नेलाई भन्दा सेवन गर्नेलाई ११ गुणा बढी हृदयघात हुने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी, धुम्रपान सेवन गर्नेलाई १० वर्ष पहिला नै हृदयघात हुन सक्छ । ‘ओपन हर्ट सजर्री’ गरिएका १० मध्ये ९ जना धुम्रपान गर्ने व्यक्ति पर्दछन् ।
नर्भिक अस्पतालले काठमाडौंका विभिन्न २० स्थानमा एक सयजनाका दरले मुटु रोगको ‘रिस्क फ्याक्टर’मा प्रश्न–उत्तर गरेको थियो । हामीले दुई हजारमाथि गरेको अध्ययनमा ६० प्रतिशत व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप देखिएको थियो । जसमध्ये ६० प्रतिशत व्यक्तिले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । यस अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण उच्च रक्तचापको जोखिम धेरै हुन्छ । हाल आएर क्यान्सरभन्दा पनि मुटुको रोगका बिरामी धेरै छन् ।
निकोटिनले नशामा ‘ब्लड कल्वस’हरू बन्दै जान्छ । ती कल्वस सर्दै मस्तिष्क वा मुटुमा गए भने आकस्मिक मृत्यु (सडेन डेथ) हुन्छ । व्यक्तिको हिँड्दाहिँड्दै, काम गर्दागर्दै, सुतेकै अवस्थामा वा जतिबेला पनि मृत्यु हुन सक्छ ।
अहिलेका युवा बाबुआमाको डरले लुकेर चुरोट सेवन गर्ने गर्छन् । लुकेर छिटोछिटो सेवन गर्दा, झन् धेरै खाने बानी बस्छ । एउटा चुरोटमा चार हजार केमिकल र चार सय टक्सिन हुन्छ । जति छिटोछिटो चुरोट सेवन ग¥यो, त्यति छिटो केमिकल र टक्सिन शरीरभित्र जान्छ । फिल्टर भएको भन्दा नभएको चुरोट स्वास्थ्यका लागि झनै हानिकारक हुन्छ । मान्छेले चाह्यो भने चुरोट या सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको बानी हटाउन सक्छ । यति हानिकारक जान्दाजान्दै आफ्नो आयु छोट्याउने काम पक्कै गर्नु हुँदैन ।
– See more at: http://swasthyakhabar.com/2016/05/41728.html#sthash.r0kFa9oo.dpuf
प्रकाशित मिति:२०७३ जेठ १८ गते